Automatic Transmission Izingxenye, okuzenzakalelayo yokulungisa Kit, okuzenzakalelayo Master Kit - Transpeed
I-CVT Belt & Chain
Transpeed 01M 01N uwoyela automatic transmission pu ...
Ukuze Honda ukudluliswa CM5 phambi oluvala amasondo uwoyela uphawu
F4A51 okuzenzakalelayo ipulaki ezingemuva ngoba MITSUBISGHI.
gearbox Transpeed othomathikhi automotiv transmiss ...
01N TRANSPEED ukudluliswa ukuzwakalisa cap
DSG 0B5 DL501 ukudluliswa Front bamba uwoyela olwandle ...
Transpeed okuzenzakalelayo automotiv gearbox transmiss ...
6T45E ukudluliswa okokufaka sigubhu O indandatho yophawu
Transpeed Group, njengoba i international automatic transmission izingxenye umphakeli, ephikelela ukuba bamukele OEM izingxenye ukuqinisekisa izinga OEM kanye ukunciphisa izindleko yesondlo bese udala ezibiza kakhulu zibe zingenayo amakhasimende.
Njengamanje, Transpeed Mkhiqizo sigaba sihlanganisa: ikhithi kabusha, ukuhlunga, inhlangano bamba, bushing bamba, TC uwoyela uphawu, Rubber Ring, imiphini, Bushing, Solenoids, valve umzimba, ukumpompa njll Transpeed brand uye wakha idumela elihle ibhizinisi futhi bamukeleka futhi umusa umkhakha. Imikhiqizo yayo iye yaba ashisayo-nabathengisi China emhlabeni wonke.
I-TRANSPEED Bar Model ne-gear Box Code
TRANSPEED Automechanika Frankfurt ukubonisa ...
i-utomechanika, eyengxenye yamazwe omhlaba yezimoto eFrankfurt, eJalimane, isingathwa nguMesse Frankfurt GmbH odumile waseJalimane. Lo mbukiso owasungulwa ngo-1971, unomlando weminyaka engama-42 futhi ungowokuqala emhlabeni ...
Umphathi wezimakethe waseMichelle-North nowaseNingizimu Melika
UJimmy-Middle East nomphathi wezimakethe zase-Afrika
Umphathi wezimakethe waseTina-Asia